I-China Automatic 6 Heads Tomato / Chilli Sauce Izimbiza Zengilazi / Umshini Wokugcwalisa Amabhodlela Wokuvala ifektri nabakhiqizi |JUMP
Okuzenzakalelayo 6 Heads Tomato / Chilli Sauce Glass Izimbiza / Bottle Wokugcwalisa Ukuvala Umshini wokuvala
Ingilazi, insimbi, ipulasitiki
I-APPAREL, Isiphuzo, Ikhemikhali, Impahla, Ukudla, Imishini & Nezingxenyekazi zekhompuyutha, ZEMEDICAL
Amabhodlela, ibhodlela lengilazi, izimbiza
Ukusekelwa ku-inthanethi, Ukusekelwa kobuchwepheshe bevidiyo, Izingxenye zamahhala eziyisipele, Ukufakwa kwenkundla, ukuthunywa nokuqeqeshwa, Ukugcinwa kwensimu kanye nesevisi yokulungisa
Unyaka ongu-1, unyaka ongu-1
umshini wokugcwalisa ibhodlela lengilazi
Ukugcwalisa i-Capping sealing
OkuzenzakalelayoUmshini Wokuvala Amabhodlela
Isiphuzo, ujamu, juice Packaging
Uketshezi Olugelezayo, namathisela
Insimbi Engagqwali 304
ingilazi ibhodlela / imbiza, amabhodlela epulasitiki
I-5 Setha / Isethi ngenyanga yomshini wokugcwalisa ibhodlela lengilazi
Est.Isikhathi(izinsuku) 60 Kuzoxoxiswana
Amakhanda ayi-6 okuzenzakalelayo utamatisi / upelepele wesitsha sengilazi izimbiza / umshini wokuvala wamabhodlela wokugcwalisa
Hlanza ibhodlela lebhande lokuthutha kanye nedivayisi yokuphakela isikulufu ohlelweni, ugcwalise ngokuzenzakalelayo umsebenzi womlomo wokuvala.Ifanele amabhodlela epulasitiki ebhodlela lengilazi lokugcwalisa uketshezi nokufaka uphawu.
1. Ukubukeka okuphelele kwesakhiwo sensimbi engagqwali, icwecwe futhi inhle, ukugcwalisa uketshezi lwezinga lokulawula okuzenzakalelayo, ukuphakama kwezinga le-liquid kuyalungiseka.
2. Isilawuli se-LG esihlelekayo esizolawula, ukulawulwa kwesivinini esingenasinyathelo somtshali-zimali ongenisiwe, ulayini wokusebenzelana oyinhloko womshini womuntu onokwethenjelwa.
3. Indlela yokuvala i-Rotary yokugcwalisa, akukho bhodlela akukho ukumboza izinhlangano, ukuqinisekisa ukuthi ukubekwa uphawu kunokwethenjelwa.
4. Idivayisi yamandla kazibuthe, i-screw-top torque eshintshwayo ngokuthanda kwakho, bamba izinga elifanelekile lokuvala ikhava liphezulu.
Umshini Wokuvuthela Nokugeza
1 Isetshenziselwa ukugeza utamatisi omusha, ama-strawberry, umango, njll.
2 Idizayini ekhethekile yokusefa kanye nokugwedla ukuze kuqinisekiswe ukuhlanza nokunciphisa umonakalo esithelweni.
3 Ifanele izinhlobo eziningi zezithelo noma imifino, njengotamatisi, sitrobheli, i-apula, umango, njll.
Ukucwecwa, ukuhlikihla nokucwenga i-Monobloc (i-Pulper)
1. Iyunithi ingakwazi ukucwecwa, i-pulp futhi icwenge izithelo ndawonye.
2. Ukuvuleka kwesikrini se-strainer kungalungiseka (kushintshe) ngokusekelwe kwimfuneko yekhasimende.
3. Ubuchwepheshe obuhlanganisiwe base-Italy, impahla yensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu ekuthintaneni nempahla yezithelo.
I-Belt press extractor
1. Isetshenziswa kakhulu ekukhipheni nasekukhipheni amanzi emzimbeni wezinhlobo eziningi ze-acinus, izithelo ze-pip, nemifino.
2. iyunithi isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, umshini wokunyathelisa omkhulu nokusebenza kahle okuphezulu, izinga eliphezulu lokuzenzakalela, ukusebenziseka kalula nokuzinakekela.
3. izinga lokukhipha lingaba u-75-85% (ngokusekelwe ezintweni ezingavuthiwe)
4. utshalomali oluphansi nokusebenza kahle okuphezulu
1. Ukuvala i-enzyme futhi uvikele umbala wokunamathisela.
2. Ukulawula izinga lokushisa okuzenzakalelayo kanye nezinga lokushisa elingaphandle kuyalungiseka.
3. Isakhiwo esinamashubhu amaningi anesembozo sokuphela
4. Uma umphumela we-preheat kanye nokucisha i-enzyme yehlulekile noma inganele, ukugeleza komkhiqizo kubuyela ku-tube futhi ngokuzenzakalelayo.
1. Amayunithi okwelashwa okushisa othintana nawo alungisekayo futhi alawulekayo.
2. Isikhathi esifushane kakhulu sokuhlala, ukuba khona kwefilimu elincanyana kubo bonke ubude bamashubhu kunciphisa ukubamba kanye nesikhathi sokuhlala.
3. Idizayini ekhethekile yezinhlelo zokusabalalisa uketshezi ukuze kuqinisekiswe ukumbozwa kwamashubhu okulungile.Okuphakelayo kungena phezulu kwe-calandria lapho umsabalalisi eqinisekisa ukwakheka kwefilimu endaweni engaphakathi yeshubhu ngayinye.
4. Ukugeleza komhwamuko kuhambisana noketshezi futhi ukudonsa komhwamuko kuthuthukisa ukudluliswa kokushisa.Umhwamuko noketshezi olusele kuhlukaniswa ngesihlukanisi sesishingishane.
5. Umklamo ophumelelayo wezihlukanisi.
6. Ukuhlelwa kwemiphumela eminingi kunikeza umnotho we-steam.
Faka i-tube sterilizer
1. I-united ihlanganisa ithangi elithola umkhiqizo, ithangi lamanzi ashisayo, amaphampu, isihlungi esikabili somkhiqizo, uhlelo lokukhiqiza amanzi ashisayo, ishubhu ku-tube heat exchanger, uhlelo lokulawula lwe-PLC, iKhabhinethi yokulawula, uhlelo lokungena kwe-steam, ama-valve nezinzwa, njll.
2. Ubuchwepheshe obuhlanganisiwe base-Italy futhi buhambisana ne-Euro-standard
3. Indawo enkulu yokushintshanisa ukushisa, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi nokugcinwa okulula
4. Adopt mirror welding tech futhi ugcine ipayipi elibushelelezi lihlangene
5. Ukubuyisela emuva ngokuzenzakalela uma kunganele ukuvala inzalo
6. I-CIP kanye ne-auto SIP itholakala kanye nesigcwali se-aseptic
7. Izinga le-Liquid nethempeli elilawulwa ngesikhathi sangempela
Okwedlule: 300 Gallon Aseptic Bag Filling Machine
Olandelayo: Umshini Wokupakisha Izikhwama Ezincane Ezizenzakalelayo
Umshini wokupakisha wefilimu ozenzakalelayo ozenzakalelayo
I-Automatic Yogurt Jam Blister Cup Ivala uphawu M...
Zonke Izitayela Zomshini Wokutywina we-Carton High Quali...
Umshini Wokugcwalisa I-Aseptic Wezithelo Jam Namathisela
50kg-220kg Aseptic Bag Tomato Namathisela Ukugcwalisa iMac...
Imishini Yokugcwalisa Ikhekhe Epakisha Imishini Yokuvala Futhi Yonke...